भारत सच्चिएर अाए फास्ट ट्रयाक दिन सकिन्छ::NepalBhaskar
–गोपालमान श्रेष्ठ नेता नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता गठबन्धन हुनुको कारण के हो ?
दश बर्ष जनयुद्धले देश आक्रान्त थियो । हिंसाद्धार राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर विद्रोहमा लागेको माओवादीसंग १२ बुदे गरेर काँग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हो । यो अगुवाई काँग्रेसले नै गरेको हो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउने काम हाम्रो पार्टीको अगुवाइमा भएको हो ।
हो , कुनै समयमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी आमुन्ने सामुन्ने थियौ । माओवादी जनयुद्धमा सबै भन्दा बढी नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु मारिएका छन् । तर अहिले हामी मिलेका छौ । तर यसको मिलन बिन्दु १२ बुदे सम्झौता हो । यसको अगुवाई पनि काँग्रेसले नै गरेको थियो । संविधान निमार्ण पनि काग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयन पनि काँग्रेसले माओवादी मिलेर गर्नु पर्ने समय आएको छ ।
हो , कुनै समयमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी आमुन्ने सामुन्ने थियौ । माओवादी जनयुद्धमा सबै भन्दा बढी नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु मारिएका छन् । तर अहिले हामी मिलेका छौ । तर यसको मिलन बिन्दु १२ बुदे सम्झौता हो ।
अब बन्ने सरकार दक्षिणको सहयोगमा बन्दै गरेको छ भन्छन् नि ?
हामी त प्रतिपक्षमा थियौ । प्रतिपक्षको धर्म भनेको सरकारका कमी कमजोरीलाई जनतामाझ पु¥याउने हो । तर संकटको समयमा हामीले एमालेको सरकारलाई मौन समर्थन गरेकै हौ । सरकारको हनिमुन डे सम्म त हामीले मुख खोलेनौ । तर नाकाबन्दी हटेपछि पनि यो सरकारले कालोबजारी रोक्न सकेन । इन्धन उपलब्ध गराउन सकेन । मूल्य वृद्धि रोक्न सकेन । जनताले भ्रष्टाचारको मार खेप्नु प¥यो । हामी प्रतिपक्षको धर्म भनेकै यति भइसकेपछि यो सरकारकाको विकल्प खोज्नु नै हो । त्यसैमा ओली सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले नै सरकारका परिवर्तनको लागि सल्लाह ग¥यो । काँग्रेस यसमा सकारात्मक भयो ।
ओली सरकारले संविधान कार्यन्वयनकोलागि पहलनै गरेन । मधेशको समस्या समाधान गर्न पनि कुनै पहल गरेन । देशमा संविधान जारी भएपछि पनि समस्या समाधान नहुनु भनेको संविधान कार्यन्वयन गर्न नचाहेको भन्ने हो ।
ओली सरकारले संविधान कार्यन्वयनकोलागि पहलनै गरेन । मधेशको समस्या समाधान गर्न पनि कुनै पहल गरेन । देशमा संविधान जारी भएपछि पनि समस्या समाधान नहुनु भनेको संविधान कार्यन्वयन गर्न नचाहेको भन्ने हो । मधेशको समस्या झन चर्काउने काम सरकारले नै गर्यो ।
सरकार बनाउने पहिलो हक त ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसलाई होइन र ?
हो, तर काँग्रेस संग बहुमत छैन । काँग्रेसले अरुसंग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । यहाँ माओवादी त सरकारमा भएको पार्टी हो उसले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकार बनाउँदा लाग्दा हामीले सहयोग गर्नु पर्छ । उसले आफुले खाइपाई आएको सबै सुबिधा छोडेर आएको हो ।
अब सरकार आलोपालोमा चलाउछौ । चैत मसान्तसम्म प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ । त्यसपछि काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।
अब यसपाली भद्र सहमति नमान्ने पालो माओवादी केन्द्रको हो ?
यहाँ कसैले कसैलाई धोका दिएको छैन । काँग्रेसले कसैलाई धोका दिएको छैन । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुदैनन् । आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हो । यो चक्र चलिरहन्छ । हिजो माओवादी र काँग्रेसबीच द्धन्द्ध थियो । सत्तामा बसेर माओवादी दबाउने काम काँग्रेसले गरेको हो । माओवादीले काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु मारेका हो । तर अहिले सहकार्य गर्दै छौ । यहि हो लोकतन्त्रको सुन्दरता । हिजो हामी एक अर्काको विरुद्ध लडेका थियौ । तर सहकार्यको यात्रामा संविधान बनायौ । अहिले सरकारको सहयात्री हुदै छौ ।
हिजो माओवादी र काँग्रेसबीच द्धन्द्ध थियो । सत्तामा बसेर माओवादी दबाउने काम काँग्रेसले गरेको हो । माओवादीले काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु मारेका हो । तर अहिले सहकार्य गर्दै छौ । यहि हो लोकतन्त्रको सुन्दरता ।
काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु जेल जाने डरले सत्ता गठबन्धनका सहयात्री बनेका हुन भनिन्छ नि ?
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको धेरै लामो समय भइसकेको छ । यसलाई हावादारी गफ बनाउनु हुदैन । हो जघन्य अपराध गरेकालाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । जुनसुकै पक्षको होस् । अपराध क्षम्य हुदैन । अरु केहि हुदैन । सब ठिक भइसकेको छ ।
प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमण आन्तरिक राजनीतिकका कारण रोकिएको हो । पक्राउ परिन्छ भनेर होइन । सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा काँग्रेस माओवादीबीच छलफल चलिरहेको थियो, त्यहि भएर प्रचण्ड अष्ट्रेलिया नगएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारमा कसको नेतृत्वमा जान्छ ?
सल्लाह हुँदै छ । सिनियर साथीको नेतृत्वमा जान्छ । जसको नेतृत्वमा जाँदा सबैलाई समेटिन्छ त्यसैको नेतृत्वमा जान्छ । छलफल हुँदै छ । त्याग तपस्या गरेका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्वमा जान्छौ । जसको नेतृत्वमा जाँदा सबैलाई मान्य हुन्छ ।
माओवादी काँग्रेसबीच मन्त्रालय बाडफाँडको कुरा मिलिसकेको हो ?
हामीहरु आपसमा मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्दैछौ । एक भएर सरकारमा जाने हो । देशको विकास गर्नु नै अहिलेको चुनौति हो । त्यसकाराण जति एकता भयो त्यति नै सरकार बलियो हुन्छ । बलियो सरकारले नै हो विकास गर्ने । मुलुक समृद्धि बनाउने हो ।
एमाले बाहिर बसेर संविधान कार्यन्वयन हुन्छ त ?
हुन्छ । गर्नु पर्छ । संविधान घोषणा गर्दा माओवादी सरकारमा गएन तर संविधान बनाउँदा उसको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । सबै मिलेर संविधान निमार्ण गरेका हौ । मुलुमा संकट पर्दा सबै दल एक भएका हुन् । भूकम्पमा, नाकाबन्दीमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएका हुन् । त्यहि भएर एमाले पनि सरकारँंग उभिनु पर्छ । संविधान कार्यन्वयन गर्न एमाले पनि लाग्नु पर्छ । लागेन भने उसको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? त्यो एमालेले नै बुझ्छ । संविधान कार्यन्वयन भएन भने मुलुक कहाँ जान्छ ? मुलुकको भविष्य के हुन्छ ? अस्थीरता आउँछ । त्यहि भएर एमाले काँग्रेस माओवादी मिलेर संविधान कार्यन्वयन गर्नु पर्छ ।
यो सरकारमा एमाले सहभागी हुने संभावना कत्तिको छ ?
अहिले नै एमाले सरकारमा आउला भन्ने लाग्दैन । भविष्यको कुरा हेरौला ।
नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई सरकारमा ल्याउन पहल गर्छ कि गदैन ?
काँग्रेसले पहल गर्छ कि गदैन भन्दा पनि, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ । एमालेको सरकार हुँदा हामी प्रतिपक्षमा बसेका थियौ । ठूलो दलले वाच एण्ड सि को रुपमा प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ भन्ने हो । अहिले एमालेले पनि सरकारले गरेका कामहरु डे टु डे हेरौस् । एउटा प्रतिपक्षमा भयो भने सत्तामा बसेको पार्टीले सजगताका साथ काम गर्छ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ । एमालेको सरकार हुँदा हामी प्रतिपक्षमा बसेका थियौ । ठूलो दलले वाच एण्ड सि को रुपमा प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ भन्ने हो । अहिले एमालेले पनि सरकारले गरेका कामहरु डे टु डे हेरौस् ।
मधेशीको समस्या समाधान हुन्छ त अब ?
हुन्छ । मधेशको समस्या समाधान भएन भने स्थानीय निर्वाचन हुदैन । त्यत्रो भूभाग छ, त्यतिको जनसंख्या छ, त्यसको समाधान भएन भने कसरी देश अगाडि बढ्छ । मधेशका समस्या, जनजातिका समस्या, दलितका समस्या समाधान गर्नु पर्छ । महिलाका समस्या समाधान गर्नु पर्छ । यी विषयलाई संविधानमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नु पर्छ । यसकोलागि सबै दलहरु एकै ठाँउमा उभिनु पर्छ । राष्ट्रियता, गणतन्त्रको पक्षमा सबै एकै ठाँउमा उभिनु पर्छ । निर्वाचन गर्नु छ । सबै एकै ठाँउमा आयौ भने असंभव भन्ने नै छैन । निर्वाचन हुन्छ ।
मधेशको समस्या समाधान भएन भने स्थानीय निर्वाचन हुदैन । त्यत्रो भूभाग छ, त्यतिको जनसंख्या छ, त्यसको समाधान भएन भने कसरी देश अगाडि बढ्छ । मधेशका समस्या, जनजातिका समस्या, दलितका समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।
संविधानमा तोके बमोजिम तीनवटै निर्वाचन गर्न कति संभव छ ? एमालेले सहयोग गर्छ निर्वाचनमा ?
संभव छ । सबै मिलेमा हुन्छ । झमेला गर्नु हुदैन । एमाले २०४६ सालबाट प्रजातान्त्रीक पार्टी भएको हो । उसको आवरणमात्र कम्युनिष्ट हो । उसले लोकतन्त्र का निमय कानून बुझेको छ । सहयोग गर्छ ।
संघीयता लागुगर्न कत्तिको सहज छ ?
यो जटिल छ तर संभव छ । चुनौतिका बावजुद संभव छ । यसबाट पछि फर्कन सक्ने अवस्था छैन ।
सिमाङकन नभइ निर्वाचन त हुन सक्दैन नि ?
त्यो हुन्छ । सिमाकंनको लागि सहमति भएमा निर्वाचन पनि हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुन्छ । समझदारी अनुसार अगाडि बढ्छ ।
मधेशी मोर्चा सरकारमा को को आउछन् ?
उनीहरुमा पनि दुई पक्ष छन् । छलफलमा छन् । आन्दोलनरतहरु आ आफ्ना मुद्धामा छलफल गरिरहेका छन् । जे होस सबै मिलेर सरकारमा आउँछन् ।
काँग्रेसमा कत्तिको असहमति छ यो सरकार निमार्णमा ?
अलि अलि हुनु स्वाभाविक हो । राइट म्यान राइट प्लेस हुनु पर्छ । भागबण्डा नगर्ने भनेर रामचन्द्र ज्यूले नै भन्नु भएको हो । योग्यता अनुसार, आवश्यकता अनुसार काँग्रेस अगाडि बढ्छ । अब काँग्रेस एक भएर अगाडि बढ्छ ।
सरकार कति महिना सम्म चल्छ ?
सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुन थालेको छ । यो भनेको बहुमत नआउँदाको परिणाम हो । यसकारण एक बर्षमा सरकार परिवर्तन हुन थालेका छन् ।
अव आवश्यकता भयो भने कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान सकिन्छ । काँग्रेस त झन ठूलो दल हो । यसमा पछाडि हट्नु हुदैन ।
अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताहरु के गर्छ यो सरकारले ?
सभापतिले संसदमा बोलेको कुरा नै हुन्छ । मुलुकले गरेका सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन हुन्छन् । मैले ०४८ मा गरेका सन्धि कार्यन्वयन भइरहेका छन् । म नै मन्त्री हुनु पर्छ भन्ने छैन ।
सभापतिले संसदमा बोलेको कुरा नै हुन्छ । मुलुकले गरेका सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन हुन्छन् ।
फास्ट ट्रयाक बारे के हुन्छ ?
बन्छ बनाउनु पर्छ । चाँडै बनाउनु पर्छ ।
कसले बनाउँछ ?
फास्ट ट्रयाक छिटो बन्नु पर्छ । जसले छिटो बनाउछ उसलाई दिन सकिन्छ । जुन बिधीबाट छिटो बन्यो त्यो विधि अपनाउन सकिन्छ ।
फास्ट ट्रयाक छिटो बन्नु पर्छ ।भारत सच्चिएर आयो भने दिन सकिन्छ । त्यसका लागि हाम्रा शर्तहरु मान्नु पर्याे ।
भनेपछि भारतलाई पनि दिन सकिन्छ ?
भारत सच्चिएर आयो भने दिन सकिन्छ । त्यसका लागि हाम्रा शर्तहरु मान्नु पर्याे । हाम्रा शर्तहरु मानेर आयो हामीलाई फाईदा हुन्छ भने जसले पनि बनाउन सक्छ ।
नेपालले आफै बनाउनछ भनेको छ त?
नेपालले बनाउन सक्यो भने झन बेटर हुन्छ । तर भने जस्तो सजिलो पनि छैन । आफै बनाउन सके त्यो भन्दा राम्रो के हुन्छ ? सरकारले पनि आफै बनाउने भनेको छ । प्रक्रियामा पनि गएको होला । हाम्रो काम हामीले आफै गर्नु राम्रो हो । हामी ठिक भए सब राम्रो हुन्छ ।
एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कुरो होला त सम्भव ?
ललितपुरका मेयरले सर्वेन्द्र खनालकै अगाडि हाछेथुलाई ‘महानायक’ भनेपछि…
निर्वाचनको समयमा सीमा नाका बन्द , दुई हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा